Fact Check: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မဲသမာမှုလုပ်တာကို နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေက ဖော်ပြသလား- မဟုတ်ပါ - Factcrescendo Myanmar
၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မဲမသမာမှုလုပ်ရပ်တွေကို နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေက ဖော်ပြနေပြီဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ရေးသားမျှဝေနေတာတွေ့ရပါတယ်။
ဒီပို့စ်မှာ “၂၆ . ၁၂ . ၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၀၈ နာရီ ယနေ့ည နိုင်ငံတကာသတင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲ မဲ မသမာမှု သတင်း # # # # # ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မဲခိုးမှုသတင်းဟာ ယနေ့ညမှာ မြန်မာမှ ကမ္ဘာသို့ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိကြောင်းပါတဲ့…”လို့ ရေးသားထားပြီး မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့တာကို Screenshotရိုက်ကာ ပို့စ်တင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မူရင်းပို့စ်ကို အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ဒီပို့စ်ပါအကြောင်းအရာကိုပဲ ဒီနေရာ ဒီနေရာနဲ့ ဒီနေရာမှာ ပြန်လည်ကူးယူမျှဝေနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီပို့စ်မှာပါတဲ့ ဂျပန်အစိုးရရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလေ့လာရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် မစ္စတာဆာဆာကာဝါယိုဟီ နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံလာရောက်ခဲ့ချိန်မှာ ဧရာဝတီသတင်းဌာနက မေးမြန်းခဲ့ပြီး ဒီမေးမြန်းချက်ကို အင်တာဗျူးကဏ္ဍမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ “ ‘I Can See the UEC Does Not Want Elections’ in Rakhine, Japanese Envoy to Myanmar Says”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစယ်နဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၄ရက်နေ့က ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ အထက်ပါပို့စ်မှာရေးသားသလိုမျိုး ၂၆ရက်နေ့မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာမဟုတ်သလို မစ္စတာဆာဆာကာဝါယိုဟီက မြန်မာရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲမသမာမှုပြုလုပ်တာတွေရှိတယ်ဆိုတာမျိုး ပြောခဲ့တာမတွေ့ရပါဘူး။ အင်တာဗျူးခေါင်းစဉ်မှာပါသလိုပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကိစ္စကို မစ္စတာဆာဆာကာဝါယိုဟီက ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အကြောင်းမပြန်တဲ့အပြင် သူတောင်းဆိုခဲ့တာကို ကော်မရှင်ရဲ့ သတင်းဖော်ပြချက်တွေမှာ မဖော်ပြတာတွေကြောင့် ကော်မရှင်ကို စိတ်ပျက်မိတယ်လို့ ဖြေကြားထားတာကိုသာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီအင်တာဗျူးကို ဧရာဝတီသတင်းဌာနကပဲ မြန်မာလိုပြန်လည် ထုတ်လွှင့်ထားတာကို ဒီနေရာမှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ထုတ်လွှင့်တာကိုတော့ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှူ့နိုင်ပါတယ်။
မူရင်းလင်ခ့် – The Irrawaddy link | Archive link
ဒီပို့စ်မှာပါတဲ့ “Persecuted millions deniedavote”ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ “pressreader”ဆိုတဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်က ‌ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာရေးသားထားတာက ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေ မဲပေးခွင့်မရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးသားထားတာကိုသာတွေ့ရကာ အထက်ပါပို့စ်မှာရေးသားသလို ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲမသမာမှုပြုလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေးသားထားတာမတွေ့ရသလို ၂၆ရက်နေ့မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲ ရွေးကောက်ပွဲပြီး နောက်တစ်နေ့ နိုဝင်ဘာ ၉ရက်နေ့မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
မူရင်းလင်ခ့် – Pressreader link | Archive link
ဒီပို့စ်မှာ အလားတူပါဝင်တဲ့ “Suu Kyi’s Myanmar election win fails to excite foreign investors”ဆိုတဲ့ သတင်းကို NIKKEI Asiaသတင်းဌာနကရေးသားထားတာတွေ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ မဲမသမာမှုပြုလုပ်တယ်ဆိုတာ မတွေ့ရပဲ ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ စီပွားရေးမူဝါဒနဲ့ သက်ဆိုင်တာတွေကိုသာ ဝေဖန်အကြံပြုတာတွေကိုသာ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
မူရင်းလင်ခ့် – NIKKEI Asia | Archive link
“Myanmar’s 2015 vote sparked hope for democracy. This election shows only backsliding”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးသားထားကတော့ The Washington Postသတင်းဌာနကဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာလည်း အထက်ပါပို့စ်မှာရေးသားသလို ရွေးကောက်ပွဲ မဲမသမာမှုပြုလုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးရေးသားထားတာမတွေ့ပဲ ရိုဟင်ဂျာတွေ မဲပေးခွင့်မရတာ၊ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးရတာတွေကိုပဲ အဓိကရေးသာထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ရေးသားထားတာမတွေ့ရသလို ၂၆ရက်နေ့မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမှီ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့က ရေးသားထုတ်လွှင့်ခဲ့တာပါ။ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
မူရင်းလင်ခ့် – The Washington Post Link | Archive link
အထက်ပါအချက်အလက်တွေအရ မူရင်းအရေးအသားတွေဟာ ၂၀၂၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မဲမသမာမှုလုပ်ရပ်တွေကို နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေက ဖော်ပြနေပြီဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း အပါအဝင် ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ရေးသားထား ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
Title:ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မဲသမာမှုလုပ်တာကို နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေက ဖော်ပြသလား- မဟုတ်ပါ
Tagged Daw Aung San Suu Kyiနိုင်ငံရေးရွေးကောက်ပွဲ
January 20, 2021 January 20, 2021 နေရာမောင်